» Kooxo hubeysan oo dad rayid ah ku dilay Nawaaxiga Diinsoor ee gobolka Bay
Kooxo hubeysan oo dad rayid ah ku dilay Nawaaxiga Diinsoor ee gobolka Bay
January 13, 2013 - Written by Muqdisho - Edited byMuqdisho ShareSida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Magaalada Diinsoor ee gobolka Bay, gaari ay la socdeen dad rayid ah ayaa rasaas qasaro geysatay lagu furay xilli uu ku soo jeediyay Magaalada Muqdisho.
Dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay Warqaad.com in dadkii rayidka ahaa ee la socday gaariga ay waxyeelo balaaran soo gaarta inkastoo tiro rasmi ah oo dhawacanta ama dhimatay la sheegin.
Rasaasta gaariga lagu furay ayaa waxa la sheegay in ay ka danbeeyay kooxo ku labisnaa darka ciidanka dowladda oo ku sugnaa inta u dhaxeysa Diisoor oo uu gaariga soo baxay iyo deegaanada ka soo xiga dhanka Muqdisho.
Majiro mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka gobolka Bay oo ka hadlay arrintaani waxaana horay u dhacay sidaan oo kale in dad rayid ah lagu dilay Diisoor iyo Muqdisho.
One Response to Kooxo hubeysan oo dad rayid ah ku dilay Nawaaxiga Diinsoor ee gobolka Bay
Maxamed says:	January 23, 2013 at 08:00	Asc muuriyaatu qoflaxisabatamo malahan sidas darted wexey donan ayey sameynayan